YATHAZONE - Page6of 95 - NEWS and ENTERTAINMENT
ကျောက်ကပ်ရောဂါ နဲ့ လက္ခဏာ ( ၉ ) မျိုး
ကျောက်ကပ်ရောဂါ နဲ့ လက္ခဏာ ( ၉ ) မျိုး ကျောက်ကပ်ရောဂါဟာ ထူးခြားတဲ့ရောဂါ လက္ခဏာမပြတဲ့အတွက် ရောဂါကျွမ်းတဲ့ အခြေအနေရောက်မှသာ သိကြတာမို့ ကျောက်ကပ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတိထားမိအောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁. အချိန်တိုင်းလိုလိုမောပန်းနေခြင်း ကျောက်ကပ်မကောင်းဘူးဆိုတာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာ အဆိပ် အတောက်တွေ များလာစေသလို သွေးမသန့်တော့တာကြောင့် မောပန်းပြီး လေးလံ ထိုင်းမှိုင်းလာတတ်ပါတယ်။ အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်း လျော့ကျလာကာ မူးဝေခြင်း၊ အားနည်းခြင်းတွေ ဖြစ်လာပြီဆို ရင် သတိထားဖို့လိုပါတယ်။ ၂. ခံတွင်းပျက်ခြင်း ကျောက်ကပ်ထဲမှာ အဆိပ်အတောက်တွေ များလာတဲ့အတွက် ခံတွင်းပျက် တာဖြစ်နိုင်သလို လျှာက ကောင်း ကောင်းအရသာ မခံနိုင်တဲ့အတွက် အလိုလို အစားနည်းပြီး ကိုယ်အလေးချိန်ပါ လျော့ကျစေပါတယ်။ ၃. …
ဘဝသင်ခန်းစာ ဘဝမှာလူတိုင်းစိတ်ဓာတ်ကျအားငယ်ရတဲ့အချိန်လေးတွေရှိတတ်ကြပါတယ် အဲ့ဒီလို အချိန်မျိုးတွေမှာ ဝမ်းနည်းပြီး အားငယ်မသွားပါနဲ့။ စိတ်ဓာတ်ကျနေချိန်မှာ ဘဝရဲ့သင်ခန်းစာတွေကို သင်ကိုယ်တိုင် ကောင်းကောင်းကြီး နားလည်လာပါလိမ့်မယ်။ ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတွေ၊ ပြဿနာတွေကနေ သင်ယူနိုင်ဖို့ အောက်ကအချက်တွေက သင့်ကို ကူညီပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ 1️⃣ ဘဝမှာ ဘယ်သူမှ သင့်ကို မကူညီနိုင်ပေမယ့် သင့်ကိုသင်တော့ ကူညီနိုင်ပါသေးတယ်။ ဘယ်သူ့မှ သင့်ကို ကာကွယ်မပေးမနိုင်တဲ့အခါ၊ ဘယ်သူမှ သင့်ဘက်မှာ မရှိတော့တဲ့အခါ သင့်ဘက်မှာ သင်တစ်ယောက်လုံး ရှိနေပါသေးတယ်။ ဘဝမှာ ကိုယ်လမ်းကိုယ် လျှောက်ရမှာပါ။ 2️⃣ သင်လုပ်နေတဲ့အရာတွေက သင်ပြောတဲ့ စကားတွေထက် ပိုအရေးပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ဟာ သူဘယ်လောက် တော်ကြောင်း၊ တတ်ကြောင်း ခဏ၊ ခဏပြောတိုင်း သူ့ကို လူတော် …
အရပ်ရှည်စေမယ့် အကောင်းဆုံးအစားအစာများ ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်ကနေ ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ပြောပြပေးသွားမှာကတော့ အရပ်ရှည်ဖို့ စားသုံးပေးသင့်တဲ့ အကောင်းဆုံးအစားအစာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ တချို့လူတွေအတွက်တော့ အရပ်ရှည်တာက ၁၈ နှစ်လောက်မှာ ရပ်သွားတတ်ပေမယ့် တချို့လူတွေအတွက်ကျတော့လည်း ၂၅ နှစ်လောက်ထိ အရပ်ထွက်တာက ရပ်မသွားပြန်ပါဘူး။ အရပ်ရှည်ဖို့အတွက် အထောက်အကူပြုတဲ့အချက်တွေကတော့ မျိုးရိုးလိုက်တာရယ်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးတာရယ်နဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့အစားအစာ စားပေတာရယ်ဆိုပြီးရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီကနေ့မှာတော့ ဘယ်လိုအစားအစားကို စားသောက်ပေးပြီးတော့ အရပ်ရှည်အောင် လုပ်လို့ရမလဲဆိုတာ ပြောပြပေးသွားပါမယ်။ နောက်ဆုံးမှာ အရပ်ရှည်ဖို့ အတားအဆီးပေးနေတဲ့ အရာတွေက ဘာတွေလဲဆိုတာ ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ ဒီစာကို အဆုံးထိ ဖတ်လိုက်ပါနော်။ ကြက်ဥ ကြက်ဥတွေထဲမှာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ဆဲလ်တွေရဲ့ စွမ်းအင် level ကို မြင့်တင်ပေးတဲ့ ဗီတာမင် ဘီ …
နာရီဟောင်းတစ်လုံကပေးတဲ့ ဘဝသင်ခန်းစာ အဖိုးအိုတစ်ယောက်ဟာ သူ့ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာ သူ့သားအတွက် တန်ဖိုးရှိမယ့် အမွေတစ်ခုကိုပေးချင်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် သူ့သားကို ခေါ်ပြီး သူ့အဖေလက်ထက်ကပေးခဲ့တဲ့ နာရီဟောင်းတစ်လုံး⌚️ကို ပေးဖို့ပြင်ဆင်ပါလေရော။ 🔺 ဒီလိုနဲ့ သူ့သားရောက်လာတော့ အကျိုးအကြောင်းပြောပြီး နာရီကိုချက်ချင်းမပေးသေးဘဲ ‘ သားရေ ဒါကတော့ မင်းအဖိုးငါ့ကိုပေးသွားတဲ့တစ်ခုတည်းသော အမွေပဲ ဘယ်လိုလဲ ကြည့်ပါဦးဟာ .. အဖေကလဲ နာရီကအဟောင်းကြီးလေ ဒီမှာ သံချေးတွေတောင်တက်နေပြီ မကြိုက်ပါဘူး.. ဟုတ်ပါပြီ ဒါဆိုရင် မင်းနာရီရောင်းတဲ့ဆိုင်ကို သွားပြကြည့်ကွာ သူတို့ဒီနာရီကို ဘယ်လောက်ပေးမလဲလို့ ဟုတ်…အဖေ .. ဒီနာရီက အဟောင်းကြီးတဲ့ သူတို့အနေနဲ့ ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ ၅ ဒေါ်လာပဲ ပေးနိုင်မယ်တဲ့ . အေ.. ဟုတ်လာ ထားပါတော့ …
” ခွေးကျင့်ခွေးကြံ “
” ခွေးကျင့်ခွေးကြံ “ တစ်နေ့တွင် တောကစားထွက်လာသော ဘုရင်က ရွာအနီး မြက်ခင်းတွင် သိုးအုပ်ကြီးကို တွေ့လိုက်ရ သဖြင့် သူနှင့်အတူ မြင်းစီးကာ ဘေးချင်းယှဉ်လိုက်လာသော ပညာရှိ အမတ်ကြီးကို မေးလိုက်လေသည်….. “အမတ်ကြီး ဘယ်မှာကြည့်လိုက် ကြည့်လိုက် သိုးတွေက အုပ်စုလိုက်တွေ့ရတယ်နော် ” ” ခွေးတွေ ကိုတော့ ဘာဖြစ်လို့ အဲဒီလို အုပ်စုလိုက် မတွေ့ရတာလဲ ?.” “မှန်လှပါ အရှင်မင်းကြီးရဲ့ မေးခွန်းကို မနက်ဖြန်မှ ဖြေပါရစေဘုရား 🙏” “ကောင်းပြီလေ” ထိုနေ့ နန်းတော်ကို ပြန်ရောက်လာသည့် ညနေတွင် အမတ်ကြီးက အခန်းနှစ်ခန်းကို ပြင်ဆင်စေသည်…… အခန်းတစ်ခန်းထဲတွင် အသားပုံကြီးတစ်ပုံကို ချထားပြီး ခွေး အကောင် …
လင်းနို့နှင့် မြင်းရိုင်း အာဖရိက တောအုပ်ထဲက သွေးစုပ်လင်းနို့တွေဟာ ဘာမှမဟုတ်တဲ့ အကောင်တွေဖြစ်တယ်။ သူတို့ဟာ တစ်ခြားတိရိစ္ဆာန်ရဲ့ သွေးကိုစုပ်ယူ စားသုံးပြီး အသက်ရှင်ကြတယ်။ဒီလို ဘာမှ မဟုတ်တာကပဲ မြင်းရိုင်းတွေကို သေစေတဲ့အကြောင်းရင်း ဖြစ်တယ်လို့ တိရိစ္ဆာန် ပညာရှင်များက ခန့်မှန်းကြတယ်။ လင်းနို့တွေဟာ မြင်းရိုင်းတွေကို သွေးစုပ်တော့မယ်ဆိုရင် မြင်းရိုင်းရဲ့ ပေါင်ကို အရင်ဆုံး တွယ်ကပ်ကြတယ်။ တွယ်ကပ်ပြီး ပေါင်ကို ချွန်ထက်နေတဲ့ သူ့တို့ရဲ့သွားနဲ့ ထိုးလိုက်ပြီး သွေးတွေကို စုပ်ယူတော့တယ်။မြင်းရိုင်း ဘယ်လောက်ပဲ ခုန်ပါစေ၊ လှုပ်ခါပါစေ လင်းနို့တွေက ပြုတ်မကျတဲ့အပြင် သွေးစုပ်မပျက်ခဲ့ဘူး။ သွေးတွေကို စိတ်ကြိုက် စုပ်ယူတော့တယ်။ သနားစရာ မြင်းရိုင်းကတော့ ခုန်ရင်း၊ ပေါက်ရင်း မောပန်းပြီး သေပွဲဝင်ကြရတယ်။ လင်းနို့က …
လက်ပံပွင့်ဟာ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ကင်ဆာထိတောင်ပျောက်ပါတယ်ပြောတဲ့ ကရင်မကြီး အညာဒေသများမှာပေါက်လျှက်သော”လက်ပံပွင်’အမျာပေါက်လေ့ရှိကြပါတယ်။အညာဒေသအခေါအဝေါအမျိုးမျိုရှိကြပါတယ်။ ကရင်ပြည်နယ်ဒေသများတွင်”လက်ပံပွင်’အနည်းအများအလိုက်ပေါက်လေ့ရှိကြပါတယ်။ကျမတို့ကရင်ပြည်နယ် ကောကရိတ်မြိုနယ်ကျုံဒိုးမြို့ အမှတ်( ၄ ) ရပ်ကွက် အဘိုအဘွားခေတ်ကဆိုရင် ကျွန်းကလေးများမှာ လက်ပံပွင်အများအပြားကျမတို့အဘိုအဘွားလက်ထက်ကတည်းက ရှိကြပါတယ်။ ယခုကျမတို့လက်ထဲမှာ” လက်ပံပွင်” တစ်ပင်တည်း ပဲရှိပါတောတယ်။လက်ပံပွင်’” ဆေးဖက်ဝင်တယ်ဆိုတာ တောရုံတန်ရုံဘယ်သူကများမသိကြပါဘူး။ တချို့ဒေသများစားလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဆေးဖက်ဝင်မှန်လည်မသိကြပါဘူး။တစ်ချို့ဒေသများလည်” လက်ပံပွင်”ကိုစားရမှန်မသိကြပါဘူး။ ထိုင်းနိုင်းငံရွေကျောင်/ ငွေကျောင်းနာမှာဆိုရင်” လက်ပံပွင်” ထိုင်းလူမျိုးများကစာ့လေ့မရှိကြပါဘူး။ စားလည်မစားကြပါဘူ။ ကျမတို့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံအလည်အပတ်သွားကြပါတယ်။ကျမတို့ရွေကျောင်းဘုရားသွားဖူကြပါတယ်။ ငွေကျောင်းဘုရားသွားဖူးကြပါတယ်။ငွေကျောင်းဘုရားသွားဖူတော” လက်ပံပွင်’”အပင်ကြီးကြီးကို ထိုင်းလူမျိုးကဆိုရင်” လက်ပံပွင်”ကောက်ပြီးအမှိုက်ပုံထဲထည်ကြပါတယ်။ ငွေကျောင်းဘုရားသန်ရှင်ရေအဖွဲ့ခေါင်ဆောင်းကိုကျမမေးကြည်လိုက်ပါတယ်။ ထိုင်းဘာသာစကားဖြင့်မေးကြည်ပါတယ်။ အနိထန်မလိုင် မေးကြည်တော ထိုင်းနိုင်ငံသန့်ရှင်းရေအဖွဲ့ကကင်မိတ်ဒိုင် ( စာလိုမရဘူးတယ်ဟု ) ထိုင်းဘာသာဖြင်ပြန်ပြောပါတယ်။ ကျမပြောပြပါတယ်။ကင်ဒိုင်= စားလိုရတယ်ထိုင်းနိုင်ငံသာတွေကပြုံးကြပါတယ်။သူတို့ အံ့သြကြပါတယ်။ စားလို့ရလို့ ဆိုတော သူတိုအံ့သြကြလို ကျမအတွက်ကတော …
“မသာစ ဆောင်၊ ကျောင်းစ ရှောင်” ဆိုရိုးစကား အဓိပ္ပါယ်”
“မသာစ ဆောင်၊ ကျောင်းစ ရှောင်” ဆိုရိုးစကား အဓိပ္ပါယ်” “မသာစ ဆောင်…ကျောင်းစ ရှောင်”ဟူ သော ရှေးဆိုရိုး ဆုံးမစကား ရှိ၏ ။” “ မသာစ ဆောင် ” ဆိုသည်မှာ နာရေး အသုဘတို့၌ ဝေငှသည့် သံဝေဂ လင်္ကာများ ပါသော ယပ်တောင် တို့ကို ဆောင်ထားခြင်းဖြင့်ထိုယပ်တောင် ကိုမြင်တိုင်း… ထိုသံဝေဂ လင်္ကာတို့ကို ဖတ်မိတိုင်း…” ငါလည်း… တစ်နေ့ .. သေရအုံးမှာ ပါလား”ဟု မမြဲခြင်း / ဆင်းရဲခြင်း / အစိုးမရခြင်း သဘော တို့ကို ဆင်ခြင်၍ သံဝေဂ ဉာဏ်ဖြစ်နိုင်သော ကြောင့်တည်း ။ “ ကျောင်းစ …
“စကားတစ်ခွန်းကြောင့်ဘဝပြောင်းခဲ့သူ” စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် တစ်ယောက်ဟာ လမ်းဘေးမှာ ခဲတံလေးတွေ ရောင်းပြီး ငွေတောင်းနေတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခွက်ထဲကို တစ်ဒေါ်လာ ထည့်လိုက် ပါတယ်။ ပြီးတော့ သုတ်သီးသုတ်ပျာနဲ့ရထားပေါ်ကို ပြေးတက် သွားပါတယ်။ နောက်မှ သတိရပြီး ရထားပေါ်က ပြန်ဆင်းလာကာ စောစောကသူငွေ ထည့်ပေးခဲ့တဲ့သူဆပြန်သွားပြီး ခွက်ထဲက ခဲတံ တစ်ချောင်းကို နှိုက်ယူလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့သူက အလောတကြီး ဖြစ်နေလို့ ငွေထည့်ပြီး ခဲတံယူဖို့ မေ့သွားတယ်လို့ ပြုံးပြပြီး ပြောပါတယ်။နောက်ပြီး သူက ငွေတောင်းနေသူကို ပြောတယ်။ “ခင်ဗျားလည်း ကျွန်တော့်လို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ပဲလေ။ ခင်ဗျားမှာ ရောင်းစရာတွေ ရှိနေပြီး ဒါတွေကို သင့်တင့်မျှတတဲ့ စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားတာပဲ မဟုတ်လား။ ကြိုးစားပါ။” လို့ ပြောပြီး …
တစ်နေ့ကို မိနစ်(၂၀)လောက် ခြေထောက်လုပ်ရုံနဲ့ ရရှိလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူးများ
တစ်နေ့ကို မိနစ်(၂၀)လောက် ခြေထောက်လုပ်ရုံနဲ့ ရရှိလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူးများ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းတော်တော်များများကတော့ ကာယခွန်အားအများကြီးစိုက်ထုတ်ရပြီး ချွေးထွက်မောပန်းရတာမျိုးတွေ များပါတယ် ။ ဒီလိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေကြားထဲမှာမှ သက်သောင့်သက်သာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အကျိုးကျေးဇူး များစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းလေးကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ် ။ဒါကတော့ ခြေထောက်မြှောက်လေ့ကျင့်ခန်းပါ။ ခြေထောက်မြှောက်လေ့ကျင့်ခန်းကို တစ်နေ့ မိနစ် (၂၀)နဲ့ ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးရင်ရရှိမယ့် အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ (၁) ခြေထောက်ဖောတာ ၊ ရောင်တာ သက်သာမယ် ဒီလေ့ကျင့်ခန်းက ခြေထောက်သွေးလှည့်ပတ်မှုကို အထူးကောင်းမွန်စေလို့ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ အဝလွန်တာနဲ့ ၊ မှားယွင်းတဲ့ စားသောက်ပုံတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ခြေထောက်ဖောတာ ၊ ရောင်တာတွေကို လျော့ကျစေပြီခြေထောက် သွယ်လာစေပါတယ်။ ဒေါက်ဖိနပ်စီးရင်ဖြစ်တဲ့ နာကျင်မှုဒါဏ်တွေကိုလည်းသက်သာလာစေပါတယ် (၂) အစာခြေစနစ် ကောင်းမွန်လာမယ် ကိုယ်တွင်း အင်္ဂါတွေရဲ့ သွေးလှည့်ပတ်မှုကိုပါ ကောင်းမွန်စေတာကြောင့် …
Total Users : 253580
Total views : 688305